उदारीकरणको पक्षमा - Karobar National Economic Daily
query_builderAugust 18, 2017 10:02 AM supervisor_accountरमेश घिमिरे visibility293
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विकासको अवस्था चर्चा गर्दा दुई नेताको नाम आउँछ, डा. रामशरण महत र डा. बाबुराम भट्टराई । डा. बाबुराम भट्टराईले थोरै समयका लागि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए ।
उनले प्रणाली सुधार र पूर्वाधार विकासमा परिणाम देखिने प्रयत्न गरे । केही विकासप्रेमीले उनको कार्यकालको प्रशंसा गर्छन् । डा. महतका सन्दर्भमा नेपालको अर्थव्यवस्था ध्वस्त पार्ने व्यक्ति हुन् वा नेपालको अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने व्यक्ति हुन् भन्ने दुई अतिवादी कोण छन् । यस लेखमा महतले अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गरे या गरेनन् भन्ने चिरफार गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
डा. महतले जीडीपीको अनुपातमा राजस्व १२ प्रतिशतबाट २२ प्रतिशत पुगेको, राजस्व क्षमता १२ अर्बबाट ७ सय अर्ब पुगेको, विकास आयोजनामा विदेशी निर्भरता ७५ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झरेको, औसत आयु ५१ बाट ७१ वर्ष पुगेको, गरिबी ५१ बाट २१ प्रतिशतमा झरेको, औंलामा गन्न सकिने वार्षिक डाक्टर उत्पादनको संख्या सयौंमा पुगेको, मोटरबाटो, स्कुल, खानेपानी, टेलिफोन, अस्पताल, बैंक जनताको नजिकै पुगेको लगायत आफ्नो नीतिको प्रतिफल भएको दाबी गर्छन् ।
वैदेशिक र स्वदेशी निजी लगानीलाई खुला गर्ने आफ्नो नीतिका कारण विविध सेवामा जनताको पहुँच विस्तार भएको डा. महतको दाबी रहँदै आएको छ । रेमिट्यान्सका कारण गरिबी घट्नुमा पनि आफ्नो नीतिकै योगदान रहेको उनको दाबी छ । राहदानी सजिलै पाउन सकिने नीतिका कारण यो सम्भव भएको महतको तर्क छ ।
समयको गतिअनुसार स्वतःस्फूर्त विकास भएको मान्न महत तयार छैनन् । सरकारको नीतिका कारण विकास भएको उनको दाबी छ । सरकारी नीति नै गलत भयो भने विकास हुन सक्दैन, तर सर्वमान्य नीतिलाई स्वीकार गरेकै आधारमा विकासको क्रेडिट (जस) लिन र दिन मिल्ने कुरा होइन । उनले त्यो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको भए त्यसको जस लिन मिल्थ्यो ।
वास्तवमा यी स्वतः स्फूर्त भएका विकास नै हुन् । आर्थिक उदारीकरण स्वीकार गरेपछि स्वतः हुने क्रियाकलाप हुन् । यसका लागि पञ्चायत पनि बाधक थिएन, किनकि विश्वमा आर्थिक उदारीकरणको लहर चलेपछि २०४१ सालमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुँदा स्वदेशी, विदेशी लगानीलाई खुला गर्ने नीति लागू भइसकेको थियो । निजी कम्पनी खुल्नु मात्र सरकारको सफलता होइन ।
ती निजी कम्पनीले दिने सेवामा गुणस्तरको सुनिश्चित गराउनु सरकारको सफलता हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सुपरिवेक्षण भएको बैंकिङ सेवाको हकमा सफलता मान्न सकिन्छ । सार्वजनिक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगारीमा सफल भन्न मिल्दैन ।
सरकारले मुख्य रूपमा जस लिने ठाउँ भनेको सुशासन हो । सुशासनको सूचकमा थोरै मात्र सुधार भएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ आउनु मात्र विकासको सूचक होइन । मुलुकमा भ्रष्टाचारमा कमी आउनु विकासको सूचक हो ।
ठूलो बजेट खर्च गर्नुभन्दा महŒवपूर्ण विकास सूचक सुशासन कायम हुनु हो । राजस्वको आकार बढ्नु वा अर्थतन्त्रको आकार बढ्नु मात्र सरकारको सफलता होइन, त्यसको समानुपातिक र न्यायोचित वितरण गर्नु सफलता हो ।
यसो भन्दा डा. बाबुराम भट्टराईले धेरै राजस्व उठाए भन्नेहरूलाई पनि हेक्का हुनुपर्छ । त्यो पनि स्वतः बढ्दै गइरहेको थियो । सडकको लम्बाइका आधारमा विकास नाप्न हुँदैन । वातावरणमैत्री र सुरक्षित सडक कति बने र आवश्यकताका आधारमा वा अनावश्यक स्थानमा समेत कति सडक बने भन्ने सूचक महŒवपूर्ण हुन्छन् । बनेका सडकमा गुड्ने सवारी साधनले ट्राफिक नियमको कति पालना गर्छन्, त्यसका आधारमा विकासको मापन हुनुपर्छ ।
मुलुकको विकासका सन्दर्भमा आर्थिक तथ्यांकमा देखिने सूचकभन्दा महŒवपूर्ण सूचक शान्ति सुव्यवस्था हो । चोरी, डकैती, हत्या, अपराध, गुन्डागर्दी पहिलेको तुलनामा घटेको कसैले अनुभव गरेका छैनन् । भलै यसमा भट्टराईको पार्टीको केही समय योगदान रह्यो ।
तथ्यांकमा देखिँदैन तर नदेखिने गरी अहिले शासन डनबाट नियन्त्रित छ । कुनै पनि सहर बजारमा कसैले कुनै व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, स्कुल, कलेज, रेस्टुराँ, आवास विकास, जग्गा विकास डनहरूलाई खुसी नपारी गर्न सकेको छ ?
दुर्घटनामा ज्यानको जानेको संख्या कम भएको छ ? सन्तान थोरै जन्माउन थालिएकाले मृत्युदर कम र औसत आयु बढेको हो । सामाजिक क्षेत्रमा भएको सुधारमा दातृ राष्ट्रको मुख्य योगदान छ भने रेमिट्यान्स भिœयाएर अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुमा नागरिक स्वयम्को योगदान छ । सरकारको प्रयत्नले सुधार भएको देखिँदैन ।
डा. महतले अर्थव्यवस्था ध्वस्त पारे भन्ने अतिवादमा पनि सत्यता देखिँदैन । उनले संस्थान कौडीको भाउमा बेचे, अन्धाधुन्ध निजीकरण गरे भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । संस्थानहरू बन्द हुनु, निजी क्षेत्रले दिने वस्तु तथा सेवा गुणस्तरहीन र महँगो हुनुमा डा. महतको नीति जिम्मेवार रहेको आरोप लगाइन्छ । यदि समयको गतिअनुसार स्वतःस्फूर्त विकास भएको मान्ने हो र उनलाई जस नदिने हो भने अपजस पनि दिनु उपयुक्त हँुदैन ।
यस्तै, वास्तवमा उदारीकरणले वस्तु र सेवाको गुणस्तर घटाउने र मूल्य बढाउने होइन । निजी क्षेत्रले गर्ने कामलाई जनहितकारी बनाउन कानुन, मापदण्ड बनाएर कडाइका साथ लागू गर्ने जिम्मेवारी सरकार तथा नियामक निकायकै हो ।
उदारीकरण भनेको स्वच्छ र खुला प्रतिस्पर्धा हो । उदाहरणका लागि सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित हुने तर त्यसमा सिन्डिकेट हुने हो भने त्यो उदारीकरण होइन । सरकारी निकायबाट सेवा दिँदा भ्रष्टाचार र अनियमितता व्याप्त हुन्छ ।
सरकारी सेवालाई नै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आदर्श सोच अबको संसारमा व्यावहारिक हुँदैन । सरकारी सेवा तथा सरकारको भूमिकालाई सकेसम्म सानो तर प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सानोलाई सुधार गर्न सम्भव हुन्छ । बढीभन्दा बढी सेवा निजी क्षेत्रबाटै दिनुपर्छ ।
गाईवस्तुले बालीनाली खान्छन् भनेर गोठमै बाँध्ने होइन, उनीहरूलाई दाम्लो फुकाएर चौरमा छोडिदिनुपर्छ र बालीनालीमा नपसुन्जेल स्वतन्त्र रूपले चर्न दिनुपर्छ । तर, बालीनालीमा पसेर चर्न थाले गाईवस्तु भाटाले हानेर बालीनाली बाहिर निकाल्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई यसैगरी अभ्यास गर्न दिनुपर्छ ।
नेपालमा व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभका लागि अमूक निजी कम्पनी वा व्यक्तिलाई पक्षपोषण गर्न नीति–नियम तर्जुमा गर्ने तथा कानुन कार्यान्वयनमा विभेद गरिंदै आएको छ । दल तथा नेताका नजिकका व्यवसायी मात्र फस्टाउने भनेको उदारीकरण होइन । उदारीकरण भनेको व्यवसायका गर्न जति विनोद चौधरी स्वतन्त्र छन् त्यति नै सर्लाहीको कुनै एक गाउँको चौधरी पनि स्वतन्त्र छ ।
राज्यले उनीहरू दुईबीचमा कुनै विभेद गर्दैन; अर्थात् उदारीकरणको नाममा नेपालमा क्रोनी क्यापिटलिज्मको अभ्यास भइरहेको छ । त्यसैले यसैको आधारमा उदारीकरणको नीति खराब हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन । उदारीकरण भनेको अराजकता होइन । सरकार तथा नियामक निकाय भन्ने तŒव जहिलेसम्म रहन्छ, तबसम्म उसको शक्ति, अधिकार र नियन्त्रण त अन्तर्निहित नै हुन्छ । त्यसको प्रयोग कुन–कुन अवस्थामा कसरी गर्ने भन्ने मात्र हो ।
त्यसैले महत न नेपालको विकासका सूत्रधार हुन्, न विनाशका सूत्राधार । उनले आफ्नो समयको एक नेतृत्वको भूमिका मात्र निर्वाह गरेका हन् । अर्थमन्त्री वा कुनै मन्त्रीको मात्र हैसियतमा रहेर सम्पूर्ण विकासका लागि योगदान गर्न सम्भव हुँदैन ।
यसका लागि प्रधानमन्त्रीकै भूमिका आवश्यक पर्छ । तथापि प्रभावशाली मन्त्रीको हैसियतले महतले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ त्यागेर राष्ट्रहितका लागि केही गरे कि गरेनन् भन्ने प्रश्नको पनि उत्तर खोज्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचार नेपाल राष्ट्र बैंक